Breziliana Dimy, Mitia Ny Zavatra Ataony Ary Manao Ny Zavatra Tiany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Janoary 2014 19:07 GMT
Ny gazetiboky #AMF ( fanombohan'ny #AmoMeuFazer: Tiako ny zavatra ataoko) dia avy amin'ny famoaham-bokin'ny “Editora Florista”. www.amomeufazer.com.br | www.editoraflorista.com.br | Facebook | @amomeufazermagr photos: Gleice Bueno, nahazoan-dalana
[amin'ny teny portiogey ny rohy rehetra] Nivoaka voalohany tamin'ny septambra 2013 ny #AanmoMeuFazer (#AMF) izay gazetiboky breziliana mivoaka indroa isam-bolana mikasika ireo olona izay mitia ny zavatra ataony, mitantara ny fiainan'izy ireo sy ny fomba famoronany.
“Olona nanova ny fomba fisainany, fahatsapany, ny fifandraisany amin'ny hafa, ny fiasany ary ny fomba fiainany tamin'ny alalan'ny zavatra nataony. Na nahita tsotra izao ny fanatontosana ny asa andavanandro sy ny hasambarana amin'ny zavatra ataony. Hamelabelatra ireo fanao isan-karazany, ny fomba nentin-dry zareo nanagan-javatra, ary ny hatsaran'ny zavatra nataon'ny tsirairay tamin'izy ireo izahay.”
Bilaogy no nanombohany, A Florista, izay nandritra ny telo taona, nanangona sarin'endrik'olona mitia ny zavatra ataony, ka ireo no nantsoiny hoe “Voninkazo”. Vetivety avy eo dia nisy ireo vehivavy namana bilaogera: Karine Rossi, Gleice Bueno ary Dani Scartezini, nahatsikaritra fa ny tian'izy ireo tamin'ny bilaogy dia “ny fifaneraserana, mahafantatra akaiky kokoa, manoratra sy mizara ireo tantara marina sy manova fiainana”.
Izay no nandraisan'ity bilaogy ity ny anarana hoe Editora Florista, ka ny vokatra voalohany dia ny gazety an-tserasera #AMF, izay hamarana ny telovolany voalohany tamin'ny tafatafa miisa 18 arahina sary mahafinaritra sy horonantsary aza indraindray. Ny vokatra faharoa: Escola do Fazer (sekolin'ny fahaiza-manao), izay tetikasa mikendry ny olona hitia ny zavatra ataony, sy ireo olona te-hianatra zavatra iray mety hahitany fahasambarana, hizara ny fahaiza-manaony.
Amin'ity lahatsoratra ity ary, dia nifantina vehivavy dimy izahay izay notantaraina tao amin'ny gazetiboky #AmoMeuFazer. Ny zavatra iraisan'izy ireo dia ny fananana fahasahiana handao asa tokana na maro mba hanatanterahany izay zavatra tiany ary dia nanomboka nankafy tokoa ny zavatra ataony.
Mpahay maritrano lasa mpanabe
Nanao fiofanana momba ny maritrano i Fabi Diaz, dia nanokatra fivarotana toera-pisotroana tao Sao Paulo ary farany dia nandao ny zava-drehetra mba hiaina any Bahia. Tao amin'ity toerana ity dia Ny fifangarihan'ny hatsaran'ny natiora sy ny fahantrana manjaka ao an-toerana no nanosika azy hiasa ao amin'ny sehatry ny fanabezana ankizy. Enin-taona izay, nanangana sekoly iray izy, Jardim do Cajueiro, toerana lehibe hianarana zava-kanto, mozika, ny fiaraha-miaina ary ny fanentanana [fanairana] momba ny tontolo iainana:
Misy hatrany ny herim-po, ny topi-maso mankany amin'ny ankizy, ny filan'izy ireo sy ny fianakaviany, nanondroanay ny lalana, ka dia tafapetraka avokoa ny zava-drehetra taorian'ny fianarana maro natao, fianarana ny fahendren'olombelona sy ny pedagojia Waldorf… Miankina indrindra indrindra amin'ny fanohanan'olona miantoka fikarakarana zaza iray ny sekoly. Tena zava-dehibe tokoa ity fanohanana ara-bola ity satria mandray vatsim-pianarana ny 75%-n'ny mpianatra ato aminay. Zava-dehibe ireo fiantohana mpianatra ireo, ary mitolona mandrakariva izahay hahazoana mpiahy bebe kokoa
Nahazo fanampiana ara-bola entina hanorenana ny ivon-toeranay izahay tamin'ity taona ity, nofy iray lehibe [tanteraka]. Nanome sombin-tany ho anay ny fiadidiana ny tanàna ho fankasitrahany ny asanay ka herintaona nitolomana dia manomboka ny asa fanorenana izahay. Ny ampatelony amin'ny vola ilaina ihany no ampela-tananay hamitàna ny fananganana, ka hahatrarana io dingana lehibe io dia mila ny fandraisana anjaran'ny rehetra amin'ny fomba rehetra izahay, na manolotra fanampiana na manampy anay hanangom-bola.
Tsy mety amin'ny trano hofaina intsony ny haben'ny sekoly, mandray ankizy hatramin'ny 70, miaraka amin'ny vinavinam-pitomboan-kilasy iray vaovao isan-taona. Mila toerana manokana izahay. Lehibe ny fikasanay, tsy afa-miverina ilalana intsony satria maro, fianakaviana maro, aina maro, lalam-piainana maro izahay… goavana ny Fifanarahana.
Mino aho fa mbola mila olona maro dia maro hifampizara nofy aminay izahay. Ny tanjonay dia ny hahatratra fon'olona maro, fanambinay ny isian'ny fanovana amin'ny alalan'ny fitiavana. Te hanolotra zavatra tena tokony ifantohana hanazava izay lalana rehetra azo heverina amin'izay mifanena aminay izahay, sy ho an'ireo te-handray anjara ho amin'ny tontolo tsara kokoa.
“Ireto ankizy ao anaty fahafahana, mahafinaritra, saingy malalaka loatra ve ry zareo! Fahafahana tahaka ny ahoana moa izany mora mifangaro amin'ny fahaverezana izany” (Fabi Diaz)
Vehivavy Mpandihy Lasa Doula
Nanapa-kevitra ny handao asa telo i Maíra Duarte mba handehanana an-tany hafa, “mijery ranomasina, mandinika ary mieritreritra ny fiainana”. Tany amin'ny tanàna kely izay tsy misy herinaratra no nahitany ny talentany tamin'ny haifitsaboana isankarazany, ny fampiterahan-jaza amin'ny fomba voajanahary no iray tamin'ny dingana iray lehibe nitondra azy hanao ny asan'ny doula :
Tsy nanam-bola mihitsy aho hodiana, ary tsy nitondra na inona nainona ny tetikasako. “Inona re no ataoko?” Ny tompon-trano izay nipetrahako milaza amiko hoe :” Rehefa tsy hitako izay atao, dia midina mankany an-drenirano aho!”. Naka lakam-pingotra aho ka nankany Rio Caraiva izay nitaona ahy hatrany an-dranomasina. Mijery ny lanitra ampitomaniana aho, nanadio ny foko aho, ary navelako hanaraka ny fikorianan'ny ony ny vatako. Nanolotro ny ranomasina ny tahotro manontolo. Nandritra izany dia izany dia nanao tamberina an-tsaina aho ka nahatsiarovako ireo zavatra izay lehibe tamiko, ireo olona niara-nianatra dihy tamiko nanova ny fiainako ary ireo fomba fanorana haiko tany !
Nitsiry ny hevitro raha vao tonga teny amin'ny tora-pasika. Nosoratako ny akanjo iray hoe : “Otra, miresaha amiko !” Ary dia nanao kisarisary tanana izay mivelatra miaraka amina marika mitangolingolika avy eo afovoany aho. Nangataka hevitra tsotsotra tamin'ny namana tany an-toerana aho, noresahako taminy ny tetikasako. Nandeha teny amin'ny tora-pasika nanao ilay akanjo (nosoratako) aho. Kelikely, nisy olona iray liana nanatona, dia tonga koa ny hafa, ary toy izay hatrany… Niasa tokoa aho nandritra ny iray volana. Nanambola am-paosy aho, ary dia tratrako ny dingana voalohany amin'ny ambaratongako (kodiaram-piainako) vaovao : hianatra ny Ayurveda aho.
Nanaraka fomba fikarakarana bevohoka mialoha ny hahaterahana, mifaindran-dalana amin'ny dokotera aho tamin'ny fanaovana otra, fifampiresahana ary ny fanomezana torolalana ayurvéda. Niezaka nanokatra sehatra ahafahan'ny mpitondra vohoka maka toro-hevitra, ifehezany ny tahony, ary ny fiomanany na ara-batana na ara-tsaina aloha sy aorian'ny fiterahana. Io sehatra io ihany koa no ahafahan'ny namana na vady mahita ny anjara toerany hikarakaràna ny vehivavy sy hahafantarany kokoa ny fizotran'ny zavatra iray tsy noraharahian-dry zareo nandritra ny ampolotaonany maro. Ny Otra no fotoana mampifandray akaiky ny reny sy ny zaza, mahatsapa ho mifandray amin'izy ireo koa aho amin'io. Miteraka fifandraisana lalina ny manotra zaza iray ao am-bohoka nandritra ny volana maro. Ary amin'izay fotoana izay no miara-manokatra lalana iray manamorany fitondrana vohoka. Mety mampiditra fifampiresahana izy io, fitsaboana amin'ny alalan'ny fandroana, toro-hevitra ara-tsakafo ary fomba fiaina. Misy zavatra takiana hatrany izay mety ho tsapantsika mandritra ny fitondrana vohoka ny fitondrana vohoka tsirairay avy
Nahazo ny zanako lahy faharoa aho taorian'ny fampiterahana voajanahary haingana sy mahafinaritra. Nanokatra varavarana ho ahy io fiterahana io, ary nitondra hery sy fahatakarana ho ahy. Nanaraka taranjam-piofananana doula sy mpanabe alohan'ny fahaterahana aho” (Maira Duarte)
Mpampianatra Lasa Mpanao Mofo
Nanao fianarana momba ny siansa sosialy sy ny haifampianarana[pedagojia] i Luciana Sápia. Nanao ny asa maha-mpampianatra, mpitantara angano ary mpiantsehatra izy. Rehefa lasa reny anefa izy, no nahatsikaritra ny fahaizan'ny tanany ka izany no nanomboka nanamboarany mofo, mofomamy ary sakafo hafa. Tao an-dakoziany no nipoiran'ny Confraria Santa Barbara, trano fanaova-mofo an-trano mampiasa ny fomban'ny mpanao taozavatra amin'ny alalan'ny famoronana miainga amin'ny fahalalana nentim-paharazana.
Tamin'ny fomba fiasa iray teo amin'ny tontolo no nahafahako namaha ny olana mahazo ny reny maoderina maro ankehitriny amin'ny safidy roa mahasanganehana: Ahoana no iasana any ivelany sy hikarakarako ireto zanako?
Talohan'ny naha-mpanao mofo ahy, dia mpampianatra teny amin'ny akanin-jaza aho, tsy ampy amin'ny fandaniana andavanandro anefa ny vola azoko amin'izany ary tsy te ho banga eo amin'ny fiainana andavanandron'ireo zanako aho.
Ny fandraisana anjara eo amin'ny tsenan'ny asa amin'ny alalan'ny asa “ifanarahana” sy ampy karama dia ho nandaniana ora maro isan'andro nefa tsy mahefa ireo zavatra tena ilaiko, ary mety ho tsy mahavita ny zavatra rehetra tiako atao aho: amin'ny maha-reny, vehivavy, ary namana, mahandro, mandoko, mamboly, mandihy… mba tena sambatra
Ary dia nanomboka nanao mofo aho. Nentina hanampiana ny karamako isam-bolana amin'ny fanaovana asa izay ankafiziko fotsiny izany tany am-boalohany sy anolorana zavatra tsara hoan'ny olona, hitako anefa avy eo fa tena tiako tokoa ilay izy ary ampy enti-manana ahafahana manohy azy
Nividy lafaoro aho, nandamina ny lakozia, napetrako tanaty harona ireo mofo ary dia teo izahay! Araka izany, tao an-tranoko, tao anatin'ny hafanan'ny tokantranoko, teo anilan'ireo zanako no afahako manolotra anareo hoe : “Mila mofo mbola mafana ve ianao?”
Tsara ny nofinofiko. Ary samy mamelona ny nofinofiko ny mofo vitako tsirairay avy.
“Ireo tanako no tena niova indrindra nandritra ny fitondrako vohoka : tanan-dreny izay mitsapa ny tontolo, izay mitady fitiavana mba hanolorana azy amin'ny zaza vao teraka”
Mpanaingo Lasa Mpanjaitra
Nandao asany maha-mpanaingo azy i Gisele Dias ka lasa mpanao akanjo lamaody, havanana amin'ny fitafim-behivavy noforonina miainga avy amin'ny dantelina sy ny voninkazo. Rehefa manjaitra ny akanjo araka ny itiavan'ny mpanao komandy izy no milaza ny tantaram-pitiavana amin'ny alalan'ny akanjo:
Nanokatra ny varavarany tamin'ny taona 2005 ny tranombarotra ‘A modista’. Tsy vitsy ny fahasarotana… tsy maintsy atrehina ny tahaka azy ireny rehefa manapa-kevitra hanao zava-baovao izay tsy mbola fantatrao tsara akory. Sarotra ny miala amin'ny asa iray, mila safidy maro ny fiovana amin'ny zavatra iray mankany amin'ny zavatra hafa… Ary asa sarotra ny fakana sy fisafidianana ny tokony atao! Izaho no ohatra iray amin'ny olona izay nanana asa ikaramana ka nandao ny asany mba hanao varotra. Eny, varotra no ataoko, tsy dia tsaroantsika loatra izay toe-javatra iray izay rehefa manan-tsaina mahay manangan-javatra isika ary manapa-kevitra ny hanomboka fandraharahana.
Tena mijaly aho rehefa mifampiraharaha amin'ny olona. Miaiky aho fa tsy ny olona maha-te-miaramonina indrindra etoambonin'ny tany. Mitandri-teny loatra aho ary tsy dia mifandray aman'olona eo amin'ny fiaraha-monina, saingy nanery ahy hanao izany ny varotra. Somary sarontsarotra izany tany am-boalohany. Saingy fianarana tsara izany satria ny fahasarotana no mahalehibe antsika rehefa manana fanetren-tena hianatra avy aminy isika…
Sambatra tanteraka amin'ny zavatra nataoko saingy tsy mety ho afa-po mandrakizay. Rehefa tsy zavatra iray, dia hafa, ary amiko dia mbola eo am-panombohana hatrany izahay na dia efa valo taona nisokafana aza… nahomby ny zavatra maro, nefa mbola betsaka ny tetikasa tratrarina ary toy izany no fiasako, ny fiatrehako ny fiainako sy ny hoaviko. Raha hiaina hanao izay tiana atao, dia mila fanetre-tena sy fahalalahana tsy misy fepetra izany. Marina fa ny fahavononana sy ny fananana herim-po betsaka no mampandroso ny tetikasan'ny tsirairay na iza izy na iza. Hisy hatrany ny fotoan-tsarotra sy ny fotoam-pifaliana tanteraka…Mahatsiaro ohabolana zen iray aho manao hoe “ny tsiambaratelo lehibe dia ny afa-mihevotra toy ny hazo izay milefitra amin'ny rivotra fa tsy tapaka!” Eo amin'ny fiainako, dia mino aho fa tonga araka ny fiasan'ny taova fa tsy ara-tsaina loatra ny zava-drehetra. Entin'ny fientanam-po matetika ny zava-drehetra.
Mpisolovava Lasa Mpitsabo (tsy dokotera)
Niasa amin'ny maha-mpisolovava azy eo amin'ny sehatry ny zon'ny fianakaviana nandritra ny taona vitsivitsy i Titi Vidal, nahazo asa tsara izy, saingy tamin'ny fialamboly iray no tena nahitany ny nanaovana azy. Ankehitriny dia mpijery vintana amin'ny alalan'ny laharan-kintana sy amin'ny alalan'ny karatra, ary mpitsabo amin'ny mahaolona feno izay tsaboiny fa tsy amin'ny maha-marary azy i Titi, miasa mandritra ny 12 hatramin'ny 14 ora isan'andro izy ary tsy mbola nahatsiaro ho sambatra tahaka izany :
Nanao ny asa maha-mpisolovava aho amin'ny atoandro saingy mitady zavatra hafa atao sy nanohy mianatra ny alina sy ny faran'ny herinandro. Lasa mpijery vintana amin'ny laharan-kintana sy mpijery vintana amin'ny karatra aho. Farany aho lasa nianatra, namantatra fomba fitsaboana vitsivitsy ary lasa mpitsabo mijery ny mahaolona manontolo fa tsy amin'ny maha-marary azy.
Fantatro fa indray andro any, rehefa nangataka famantarana, dia nahazo hafatra iray tena mazava be aho ka niala tamin'ny asako.
Nanaraka fampianarana momba ny anganongano grika aho. Niresaka angano iray izay ny mpampianatra, no nangataka famantarana mazava tamin'ny anjely anjely aho, notapahiko ny fampianarana mba hiresahako momba ny Apollon izay tsy misy ifandraisana amin'izay noresahanay tamin'io andro io. Nolazaiko mazava fa tokony ho tahaka an'i Apollon isika eo amin'ny fiainana ary mba hanary ny zava-drehetra mba handeha amin'ny nanaovana antsika tokoa. Niresaka maharitra momba izany aho mandra-pahafantarako fa natao ho ahy izany hafatra izany. Tamin'io fotoana io, izay tena nahagaga ahy, no nampitomboina indroa avo heny ny karamako aho mba hijanonako ! Dia hoy aho hoe : dia ahoana, izay ve ilay famantarana ? Nofikiriko ny hevitro handeha aho ary nanokateny manontolo ho amin'izay lasa asako.
Mpandinika ny vintana amin'ny kintana aho, mpandinika ny vintana amin'ny karatra ary mandritra ny fomba fitsaboana ataoko no nahitako ihany koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny taratra. Ireo no asako, ny sehatra idirako, izay tena mahasambatra ahy ankehitriny. Tiako ny zavatra ataoko.
(Titi Vidal)”Fantatro fa hisy fotoana izay hitsapana antsika. Nisedra fitsapana tamin'ny rehetra isika izay manontany raha tena io tokoa no tiantsika atao” (Titi Vidal)